Betty Reardon: waxbarashada nabadeed oo dhameystiran - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[Nofeembar 1, 2021] AHDR waxay raadisaa Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada -Taariikhda Waxbarashada (Cyprus) Jobs
[Nofeembar 1, 2021] Ololaha Shine Africa ayaa bilaabay: beeritaanka geedaha Moringa iyo kor u qaadista wacyiga waxbarashada nabadda Warar & Muuqaal
"Waa maxay qeexitaanka guud ee waxbarashada nabadda aan bixin karno in ka badan barashada barashada, iyo ka shaqeynta iyo kakanaanta, si kor loogu qaado taajirnimada iyo kala duwanaanta nolosha?" - Betty Reardon, oo ku wajahan qaab nabadeed (1989)
Baro wax badan oo ku saabsan xigashada adoo booqanaya Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada ee aad u gaarka ah Xigashooyinka Waxbarshada Nabadda & Xusuusta: Buugga Tilmaamaha Waxbarashada Nabadda. Buug-gacmeedka buug-gacmeedka ayaa ah ururinta tifaftirka ee xigashooyinka la sharaxay ee aragtiyaha aragtida, dhaqanka, siyaasadda iyo barbaarinta ee waxbarashada nabadda. Gelitaan kasta oo tixraac / buug-gacmeed waxaa lagu buuxinayaa meme farshaxan ah oo lagugu dhiirigelinayo inaad soo dejiso oo ku faafiso warbaahinta bulshada.
# aragtida waxbarashada nabada
Sidee ayay u adag tahay hirgelinta waxbarashada nabadda ee Rwanda?
Qoraalkan gaarka ah, Betty Reardon waxay ku soo bandhigeysaa fikradda iyo istiraatiijiyadda qorshooyinka waxqabad ee dadka: bulshada rayidka ah waxay u qorsheyneysaa hab haweenka dhulka jooga ay uga helaan talo dheeraad ah siyaasadaha guud si loo meel mariyo UNSCR 1325 haweenka, nabadda, iyo amniga. [sii wad akhriska…]
Sharciga oo ah Qalabka Nabadda: "Dembiilayaasha Dagaalka: Dhibbanayaasha Dagaalka"
December 12, 2018 CV, Features, Warar & Muuqaal 4
Maqaalkan Betty Reardon waa kii saddexaad ee taxane ah oo sahaminaya Betty's 6 sano oo nabadeed barasho: dib u eegis ay ku daabacday qoraalkeeda horumarinta aragtiyaha, waxbarashadda, manhajka, iyo u diyaargarowga macallimiinta ee waxbarashada nabadda. Qoraalkan, Betty waxay faallo ka bixineysaa "Dambiilayaasha Dagaal, Dhibbanayaasha Dagaal," oo ah unug daraasad dalab adduun oo loogu talagalay fasallada sare ee "Crises in World Order Series" oo la daabacay 1974. Faallooyinka Betty waxay baareysaa "kiiska Shimoda," waxayna kor u qaadeysaa arrimaha sharcinimada hubka nukliyeerka iyo joogitaanka shaqsiyaadka muwaadiniinta ah ee sharciga caalamiga ah. Waxay kiiskan ku xireysaa dadaallada casriga ah ee lagu dabaqayo sharciga caalamiga ah ee baabi'inta hubka nukliyeerka. Kiiska iyo qalabka dammaanadda ee wadajirka ah ee la wada adeegsaday waxay furi karaan baaritaan ku saabsan doorka sharciga ee, iyo mas'uuliyadda muwaadinka ee hub ka dhigista iyo dhaqdhaqaaqyada nabadeed ee heerarka sare iyo kuwa hoose. [sii wad akhriska…]
Barida ku saabsan Baabi'inta Nukliyeerka: Toddobaadka Hub ka dhigista ee 2018
October 24, 2018 Warar & Muuqaal 1
Markii ugu horreysay ayaa loogu yeeray 1978 dii Dukumentiga ugu dambeeya ee Kulankii Gaarka ahaa ee UN-ka ee ugu horreeyay ee Hub ka dhigista, Toddobaadka Hub ka dhigista wuxuu bilaabmayaa sanad-guuradii aasaaskii UN-ka. Waa wakhti barayaasha nabadda ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka iyo fursadaha ka dhalan kara dadaallada ku wajahan waxa Elise Boulding ay ugu yeertay "adduun hub la'aan" Maaddaama Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Nabadda ee wax ku biirinta ujeeddooyinka usbuuca, waxaan bixinnaa qalab si loo bilaabo dood ku saabsan baabi'inta hubka nukliyeerka, iyo ka fiirsashada qorista "taariikh cusub." [sii wad akhriska…]